Izibonelo Eziyisi-6 Zamathuluzi Okuthengisa Asebenzisa Ubuhlakani Bokwenziwa (AI) | Martech Zone
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela (AI) isiba ngelinye lamagama adume kakhulu okuthengisa. Futhi ngesizathu esihle - i-AI ingasisiza senze imisebenzi ephindaphindwayo, senze imizamo yokuthengisa ibe ngeyakho, futhi senze izinqumo ezingcono, ngokushesha!
Uma kukhulunywa ngokwandisa ukubonakala komkhiqizo, i-AI ingasetshenziselwa imisebenzi eminingi eyahlukene, okuhlanganisa ukumaketha kwe-influencer, ukudala okuqukethwe, ukuphathwa kwenkundla yezokuxhumana, isizukulwane esiholayo, i-SEO, ukuhlela izithombe, nokuningi.
Ngezansi, sizobheka amanye amathuluzi we-AI angcono kakhulu wabakhangisi abangathuthukisa ukuguqulwa kwemikhankaso, bakhulise ukusebenza kahle, futhi bakhulise ukubonakala kwewebhusayithi:
I-AI-Driven I-Influencer Marketing
I-IMAI iyinkundla yokumaketha eqhutshwa yi-AI esivumela ukuthi sithole abathonya abalungile bomkhiqizo, silandelele ukusebenza kwabo, futhi silinganise i-ROI. Isithako esibalulekile ku-IMAI yithuluzi layo elinamandla lokutholwa kwe-AI elikwazi ukusesha futhi liqoqe idatha kubagqugquzeli be-niche kakhulu ku-Instagram, Youtube, nakuTikTok.
I-AI inikeza ithuba lokuthi imikhiqizo ithole futhi iqondise iningi labagqugquzeli be-niche embonini yabo. Ikhono le-AI lokuthola ngokushesha abathonya livumela i-IMAI ukuthi ibe nesizindalwazi esiqine kakhulu.
U-Amra Beganovich, i-CEO ye-ejensi yokumaketha yedijithali U-Amra & Elma
Isibonelo, umkhiqizi wezimoto ofuna ukuthola abagqugquzeli bezimoto abathanda izimoto zezemidlalo kuphela angakwazi ukuthola amanxusa omkhiqizo we-niche angaba khona esebenzisa i-AI ngaphandle kokuthi afune wona mathupha ezinkundleni zokuxhumana. Leli khono lokubona ithalente elihambisana kakhulu nenani labantu eliqondiswe umkhiqizo lisiza ukukhulisa ukuguqulwa kwabathonya futhi kwandise i-ROI yomkhankaso.
Thola idemo ye-IMAI
I-AI-Driven Ukudalwa kokuqukethwe
I-Quillbot iwumsizi wokubhala onamandla we-AI ongasiza ekudaleni okuqukethwe okungcono, ngokushesha. Isebenzisa ukucutshungulwa kolimi lwemvelo (I-NLP) ukuhlaziya umbhalo nokunikeza iziphakamiso zendlela yokuthuthukisa ucezu lombhalo. Isibonelo, i-Quillbot ingaphakamisa amanye amagama noma imishwana, iphakamise amagama afanayo, noma inikeze namathiphu ohlelo.
Ukusebenzisa i-AI ukusiza ekudaleni okuqukethwe kusivumela ukuthi sithuthukise ukuthengiseka nokwenza kube ngokwakho iwebhusayithi yethu nokuqukethwe kwenkundla yezokuxhumana. Isibonelo, i-AI isivumela ukuthi sikhulise ukukhanga kwekhasi lokubikezela noma okuthunyelwe kwebhulogi ngokwenza iziphakamiso zamagama noma izinkulumo ezingase zizwakale njenge-monotone kakhulu futhi ziyisicefe.
U-Eliza Medley, umphathi wokuqukethwe we I-Hostinger
I-Quillbot inezici ezimbalwa ezingasiza ukufaka umhlahlandlela wesitayela, isihloli sokukopela, kanye nesikolo esifundekayo. I-AI inganikeza umhlahlandlela ekubhalweni kabusha kwamagama ama-athikili noma imisho futhi iwenze athakazelise kakhulu.
I-AI-Driven Ukuphathwa Kwezokuxhumana Komphakathi
Meet Edgar iyithuluzi lokuphatha inkundla yezokuxhumana elinamandla e-AI elisiza ngokuzenzakalelayo ukuthunyelwa kwenkundla yezokuxhumana. Kusivumela ukuthi sakhe amabhakede okuqukethwe ngokusekelwe ezihlokweni, amagama angukhiye, noma ama-hashtag. Isofthiwe ibe isigcwalisa lawo mabhakede ngokuqukethwe okuvela emithonjeni eyahlukene, okuhlanganisa okuphakelayo kwe-RSS, amabhulogi, nezindatshana.
Ukuhlala phezu kwamathrendi kunikeza amabhrendi ithuba lokudalela izethameli zabo okuqukethwe okunenjongo. Ngokusebenzisa i-AI ukuqoqa idatha yakamuva ehlobene nemboni, singakwazi ukuthuthukisa isu lethu lenkundla yezokuxhumana ukuze sixhumane kangcono nezithameli zethu.
U-Reynald Fasciaux, i-COO ye I-Studocu
I-MeetEdgar isivumela ukuthi nathi sihlele okuthunyelwe kwethu kusenesikhathi, futhi iqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwethu kuthunyelwa ngezikhathi ezingcono kakhulu zokuzibandakanya. Isibonelo, uma sinokuthunyelwe kwebhulogi esifuna ukwabelana ngakho ezinkundleni zokuxhumana, i-MeetEdgar izosivumela ukuthi siqale siyisebenzisele izindaba ezithakazelisa kakhulu nezakamuva zemboni, ngemva kwalokho izokwabelana ngokuthunyelwe ngesikhathi esithile ngokusekelwe emsebenzini wababukeli. amaphethini.
Zama u-Edgar Mahhala
I-AI-Driven Generation Generation
I-LeadiQ iyithuluzi lokukhiqiza eliholayo elinikwe amandla yi-AI elisisiza ukuthi sithole futhi sifanelekele ukuhola, ngokushesha.
I-LeadiQ isebenzisa imithombo eminingi yedatha eyahlukene ukuze ithole umkhondo, okuhlanganisa inkundla yezokuxhumana, amabhodi emisebenzi, nezinkomba zebhizinisi. Uma i-LeadIQ isithole ukuhola, izosebenzisa i-NLP ukuhlaziya ukuba khona kwabaholayo ku-inthanethi futhi ithole ukuhola ngokusekelwe emathubeni abo okuba nentshisekelo kumkhiqizo noma isevisi yethu.
Ukusebenzisa i-AI ukwenza imizamo yokuthuthukisa ibhizinisi ngokuzenzakalelayo kunikeza ithuba lokuqhubeka nokuqinisa ikhwalithi yobudlelwano phakathi kwemikhiqizo namakhasimende. Inikeza ithuba lokugxila kakhulu esicini somuntu salobo budlelwano ngokonga isikhathi kumanuwali futhi kwesinye isikhathi inqubo yokutholwa kwamaklayenti enzima kakhulu.
U-Berina Karic, umphathi wezokumaketha kwa- I-Ejensi Yokumaketha Yethonya Eliphezulu
I-LeadiQ ingasetshenziselwa ukusetha imikhankaso ezenzakalelayo yokukhulisa abaholayo, ukuze siqhubeke nokusebenzelana nabaholayo bethu ngisho noma bengakalungeli ukuthenga ngokushesha. Isibonelo, singasetha isofthiwe ukuthi ithumele uchungechunge lwama-imeyili kwabaholayo ngokuhamba kwesikhathi, noma sibashayele ucingo uma bengakaphenduli kuma-imeyili akho.
Qala Nge-LeadiQ Mahhala
Ukuthuthukiswa Kwenjini Yokusesha Eqhutshwa yi-AI
I-Moz Pro i-AI-powered Search Engine Optimization (SEO) ithuluzi elisiza ukuthuthukisa izinga lamawebhusayithi ezinjinini zokusesha.
I-Moz Pro isebenzisa imithombo eminingi yedatha eyahlukene ukuze ihlaziye iwebhusayithi futhi inikeze iziphakamiso zokuthi ungayithuthukisa kanjani i-SEO yomkhiqizo.
I-Moz isivumela ukuthi singene ngemibandela yobunzima obuphansi, futhi sithole amagama angukhiye e-niche angase ashaywe indiva izimbangi. Lokhu kunikeza ithuba lokuthuthukisa isu lokumaketha okuqukethwe elisekelwe endleleni yokuhlaziya esikhundleni sokuqagela, okungukuthi ukudala okuthunyelwe noma amakhasi okubikezela azwakala emuhle ngokombono kodwa angase angatholi ithrafikhi.
UChris Zacher, I-Content Marketing Strategist kwa I-Intergrowth
I-Moz Pro isiza ekutholeni amagama angukhiye asebenza kahle kakhulu ongawaqondisa, inikeze iziphakamiso zokuthuthukisa isihloko sewebhusayithi nama-meta tags, futhi ilandelele amazinga ngokuhamba kwesikhathi. Inezinye izici eziningi ezingasiza ukuthuthukisa i-SEO yomkhiqizo, okuhlanganisa ithuluzi lokwakha izixhumanisi, ithuluzi lokuhlola isayithi, kanye nethuluzi lokuhlaziya lokuncintisana.
Qala isivivinyo sakho se-Moz Pro
I-AI-Driven Ukuhlela isithombe
I-Luminar AI ingumhleli wesithombe esebenzisa i-AI ukwenza lula ukuhlela izithombe futhi ikwenze kufinyeleleke kwabaqalayo noma abathwebuli bezithombe abafuna ukuhlela ngokushesha esikalini. Inikeza abasebenzisi ikhono lokudala izithombe ezifana ne-Photoshop ngokuchofoza okumbalwa nje ngokufunda ngokuzenzakalela isithombe nokuhlonza izici ezihlukene zaso, okuhlanganisa ingemuva, izici zobuso, izingubo zokugqoka, nokuningi.
I-Luminar inikeza ithuba kochwepheshe abangebona abe-Photoshop ukuthi badale izingcezu ezihlukile zokuqukethwe okungenzeka zithole ukubandakanyeka nokuguqulwa. Ngokuchofoza okumbalwa nje, singakwazi ukulungisa ingemuva lesithombe, isikhumba esibushelelezi, sikhanyise amehlo, futhi siqedele eminye imisebenzi ngokuvamile engadinga amahora wokuhlela.
llija Sekulov, Digital Marketing & SEO at Umphathi wemeyili
Bheka i-Luminar AI
Ikusasa le-AI Kwezokumaketha
Amathuluzi e-AI angathuthukisa kakhulu imizamo yokumaketha ngokuvumela abakhangisi ukuthi bathuthukise ukusebenza kahle, bakhulise ukubonakala, bathuthukise ukuguqulwa, nokuningi! Ngokushesha ziba yingxenye yemizamo yethu yokuthengisa yansuku zonke futhi kungenzeka zikhule zibe yinqwaba yemisebenzi esiyiqedayo lapho sikhulisa umkhiqizo. Ngokusebenzisa i-AI ukwenza imikhankaso yethu ibe ngcono, singakwazi ukwenza imisebenzi ngokuzenzakalelayo, senze ukumaketha kube ngokwakho, futhi ekugcineni senze izinqumo ezingcono, ngokushesha!
Tags: aiai amathuluziU-Amra no-Elmaukuhlakanipha okungekhona okwangempelaamathuluzi obuhlakani bokwenziwau-berina karicuchris zacherukwakhiwa kokuqukethwe aiUkukhangisa Okuqukethweukumaketha okuqukethwe aiedgarukuhlela aiimayiukumaketha kwamathonyaukukhangisa ngethonya aiukuhlumaleadiqleli Sekulovinkanyiso aiumlimi weposii-meedgarmoz proNlpisithombe aikwemaphutsa isithombeIzithombehopi-quillbotUReynald Fasciauxinjini yokusesha nokwenza kahle ailokho aisocial mediainkundla yezokuxhumana aiI-Studocutop influencer marketing agency